“The Untamed” ရဲ့ သရုပျဆောငျတှနေဲ့အတူ ရိုကျထားတဲ့ ဓာတျပုံလေးတှကေို ထုတျပွလိုကျတဲ့ လကျထောကျဒါရိုကျတာ – Sports Soccer News
၂၀၁၉ ခုနှဈမှာ စတငျထှကျရှိခဲ့ပွီး ယခုအခြိနျထိလညျး ပရိသတျကွားမှာရပေနျးစားနဆေဲဖွဈတဲ့ “The Untamed” ဇာတျလမျးကတော့ ဘယျနှဈခါကွညျ့ကွညျ့ မရိုးနိုငျတဲ့ ဇာတျလမျးပါပဲ။ အမာခံအားပေးသူတှကေတော့ ဒီဇာတျလမျးလေးကို တသသဖွဈနဆေဲပါပဲ။
December 28 ရကျမှာတော့ ထိုဇာတျလမျးတှဲရဲ့ လကျထောကျဒါရိုကျတာတဈယောကျဖွဈသူ Yue Liang ကတော့ ဇာတျလမျးထဲမှာပါဝငျရိုကျကူးခဲ့တဲ့ မငျးသားမငျးသမီးတှနေဲ့ ရိုကျထားတဲ့ ဓာတျပုံလေးတှကေို ပရိသတျတဈယောကျရဲ့တောငျးဆိုမှုကွောငျ့ Weibo မှာ တငျပေးခဲ့ပါတယျ။
သူမဟာ “သရုပျဆောငျတှနေဲ့ အတူတူရိုကျထားတဲ့ပုံလေးတှတေောငျးဆိုထားလို့ တငျပေးလိုကျပွီနျော..သူမဆီပဲသီးသနျ့ပို့လိုကျရမလား?? တျောပါပွီ “The Untamed” ဆိုတာ ပရိသတျတိုငျးအတှကျပဲလေ..” ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူ ပုံလေးတှတေငျပေးခဲ့ပါတယျ။
ဒီပုံလေးတှကေတော့ ပရိသတျကွားမှာ ပွနျ့နှံ့သှားပွီး အဓိကမငျးသားနှဈယောကျဖွဈတဲ့ GG နဲ့ DD ကို အလှမျးပိုခဲ့ရပါတော့တယျ။ Xiao Zhan နဲ့ Wang Yibo ကိုတော့ December 20 ရကျနတေု့နျးက ပွုလုပျခဲ့တဲ့ “Tencent Viedo All Star Night” မှာ​ အခြိနျတျောကွာမှ အတူတူတှခေဲ့ရတာဖွဈပွီး သူတို့နှဈယောကျရဲ့ပုံလေးတှကွေောငျ့ပဲ “The Untamed” ထဲက အတှဲညီခဲ့တဲ့ ပုံရိပျတှကေို လှမျးဆှတျခဲ့ကွရပါတယျ။
ယခုအခါမှာလညျး လကျထောကျဒါရိုကျတာ တငျပေးလိုကျတဲ့ပုံလေးတှကွေောငျ့ ထှကျရှိပွီးသားဇာတျလမျးကို တမျးတရပွနျပါပွီ။ ၂၀၂၀ ခုနှဈအတှငျး Xiao Zhan ကို ဦးတညျတိုကျခိုကျခဲ့တဲ့ အဖွဈအပကျြတှတေုနျးက လကျထောကျဒါရိုကျတာ Yue Liang ဟာ Zhan Ge ဖကျက ရပျတညျပွီး ပွနျလညျခပြေပေးခဲ့သူလညျးဖွဈပါတယျ။
Zhan Ge ဟာ ရညျမှနျသူဖွဈပွီး စိတျထားပွညျ့ဝသူဖွဈကွောငျး၊ စိတျဓာတျကွံ့ခိုငျပွီး အလုပျကွိုးစားသူဖွဈကွောငျး စသညျဖွငျ့ရေးသားပွောဆိုပွီး Xiao Zhan ဖကျကရပျတညျကာ Anti-fan တှကေို ပွနျလညျခပြေပေးခဲ့သူလညျးဖွဈပါတယျ။ xfx တိုငျးလညျး GGရဲ့ စိတျဓာတျနဲ့ ကိုယျကငျြ့သိက်ခာကိုအသိဆုံးပါပဲနျော…
အတိတျကအတိတျမှာ ကုနျဆုံးခဲ့ပွီဖွဈပမေဲ့လညျး ယခု သူမတငျပေးလိုကျတဲ့ဓာတျပုံလေးတှကေတော့ “The Untamed” ဇာတျလမျးထဲက သရုပျဆောငျတှနေဲ့အတူ ပြျောရှငျကွညျနူးစရာကောငျးတဲ့အခြိနျလေးတှကေို မွငျသာနစေခေဲ့ပါတော့တယျ
၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ စတင်ထွက်ရှိခဲ့ပြီး ယခုအချိန်ထိလည်း ပရိသတ်ကြားမှာရေပန်းစားနေဆဲဖြစ်တဲ့ “The Untamed” ဇာတ်လမ်းကတော့ ဘယ်နှစ်ခါကြည့်ကြည့် မရိုးနိုင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းပါပဲ။ အမာခံအားပေးသူတွေကတော့ ဒီဇာတ်လမ်းလေးကို တသသဖြစ်နေဆဲပါပဲ။
December 28 ရက်မှာတော့ ထိုဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့ လက်ထောက်ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်ဖြစ်သူ Yue Liang ကတော့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာပါဝင်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ မင်းသားမင်းသမီးတွေနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေကို ပရိသတ်တစ်ယောက်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့် Weibo မှာ တင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
သူမဟာ “သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ အတူတူရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေတောင်းဆိုထားလို့ တင်ပေးလိုက်ပြီနော်..သူမဆီပဲသီးသန့်ပို့လိုက်ရမလား?? တော်ပါပြီ “The Untamed” ဆိုတာ ပရိသတ်တိုင်းအတွက်ပဲလေ..” ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူ ပုံလေးတွေတင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီပုံလေးတွေကတော့ ပရိသတ်ကြားမှာ ပြန့်နှံ့သွားပြီး အဓိကမင်းသားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ GG နဲ့ DD ကို အလွမ်းပိုခဲ့ရပါတော့တယ်။ Xiao Zhan နဲ့ Wang Yibo ကိုတော့ December 20 ရက်နေ့တုန်းက ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ “Tencent Viedo All Star Night” မှာ​ အချိန်တော်ကြာမှ အတူတူတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပုံလေးတွေကြောင့်ပဲ “The Untamed” ထဲက အတွဲညီခဲ့တဲ့ ပုံရိပ်တွေကို လွမ်းဆွတ်ခဲ့ကြရပါတယ်။
ယခုအခါမှာလည်း လက်ထောက်ဒါရိုက်တာ တင်ပေးလိုက်တဲ့ပုံလေးတွေကြောင့် ထွက်ရှိပြီးသားဇာတ်လမ်းကို တမ်းတရပြန်ပါပြီ။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း Xiao Zhan ကို ဦးတည်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေတုန်းက လက်ထောက်ဒါရိုက်တာ Yue Liang ဟာ Zhan Ge ဖက်က ရပ်တည်ပြီး ပြန်လည်ချေပပေးခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Zhan Ge ဟာ ရည်မွန်သူဖြစ်ပြီး စိတ်ထားပြည့်ဝသူဖြစ်ကြောင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ပြီး အလုပ်ကြိုးစားသူဖြစ်ကြောင်း စသည်ဖြင့်ရေးသားပြောဆိုပြီး Xiao Zhan ဖက်ကရပ်တည်ကာ Anti-fan တွေကို ပြန်လည်ချေပပေးခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ xfx တိုင်းလည်း GGရဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာကိုအသိဆုံးပါပဲနော်…
အတိတ်ကအတိတ်မှာ ကုန်ဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်း ယခု သူမတင်ပေးလိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကတော့ “The Untamed” ဇာတ်လမ်းထဲက သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့အချိန်လေးတွေကို မြင်သာနေစေခဲ့ပါတော့တယျ